Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. बजेट सक्न राजधानीका सडक धमाधम पिच गरिंदै – Emountain TV
बजेट सक्न राजधानीका सडक धमाधम पिच गरिंदै
काठमाडौं, २९ जेठ । जब वर्षात् शुरु हुन्छ तब धमाधम सडकमा कालोपत्रे गरेको यत्रतत्र देख्न सकिन्छ । यस्तो काम अहिले मात्र होइन हरेक वर्ष असार लाग्ने बेलामा खासगरी मुख्य सहरी क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ । वर्षभरी सम्पन्न हुन नसकेको सडक मर्मत सम्भार होस वा कालोपत्रे जेठमा शुरु गरेर असार मसान्तसम्म सक्ने गरिन्छ ।
वर्षात् शुरु भएपछि मुख्य सडकहरुमा पिच माथि पिच गर्न थालिएको राजधानी काठमाडौंका सडकहरुमा देख्न सकिन्छ । कतै हिलो धुलो र खाल्डाखुल्डी देखिन्छ त कतै पिच माथि फेरी पिच गरिरहेको देखिन्छ ।
यस्तो काम मुख्य प्रशासनिक भवन सिंहदरवार आसपासकै क्षेत्रमा देख्न पाइन्छ । अलि परका सडकमा हिलो धुलो र खाल्डाखुल्डी पार गरि शहरका मुख्य सडकमा प्रवेश गरेका सर्वसाधारणलाई यो देख्दा अचम्म पनि लाग्छ । सफा चिल्लो पिच माथि पिच किन गरेको होला भनेर ।
सहर भित्रै पिच नभएका धुले, हिले र खाल्डाखुल्डी भएका सडक पनि प्रशस्तै छन् । तर त्यहाँ न ग्राभेलिङ गरेर पुरिएको छ न पिच गर्ने कुनै सुरसार नै छ । पिच गरिंदैछ त चिल्ला सडकहरुमै । आम सर्वसाधरणले हरेक दिन प्रश्न गरिरहेका हुन्छन् । आखिर किन गरिन्छ त कालोपत्रे सडक माथि कालोपत्रे ?
अरु बेला सडक विभाग वा सडक बोर्ड सुतेकै छन् कि जस्तो हुन्छ । जब वर्षात शुरु हुन्छ अनि सडक सम्याउने र पानी जमेकै ठाउँमा पनि पिच गर्ने गरिन्छ । जसलाई असारे विकासे काम, पैसा उडाउने मेलो भनेर सर्वसाधरणले सरकारमथि व्यंग्य गरिरहेका हुन्छन् । वर्षभरी नसकिएका सडकका कामहरु जेठ असारमा जेठ असार महिना मै गर्नु पर्ने हो त ?
वर्षातमा सडक पिच गर्नै हुँदैन । हतार हतारमा सम्पन्न गरिने सडकका कालोपत्रे गुणस्तरीय पनि हुँदैन । गरेको केही दिनपछि नै पिच उप्किन थाल्छ । यो कुरा सडक विभाग र सडक बोर्ड अनि त्यसमा खटिने इन्जिनियरलाई थाहा नभएको होइन ।
तर पनि जे गर्नु हुँदैन भनिएको छ, यहाँ त्यही भइरहेको छ । अनुगमन गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकाय पनि काम गरुनजेल आँखा चिम्लेर बसेका छन् । उपत्यका भित्र मात्रै यो आर्थिक वर्षमा सडक मर्मत सम्भारका लागि भनी ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो रकमको ५० प्रतिशत खर्च जेठ महिनासम्ममा हुने भएको छ भने बांकी रकम असार भित्रमा सक्ने योजना देखिन्छ ।